Fikasana hivarotra vary lo : Niitatra ny raharaha noho ny fanivaivana ny prefen’i Toamasina
Vous êtes ici: Accueil → Faits-Divers → 2018 → mai → 14 → Fikasana hivarotra vary lo : Niitatra ny raharaha noho ny fanivaivana ny prefen’i Toamasina
Redaction Midi Madagasikara 14 mai 2018 2 Commentaires
Efa eo am-pelan-tanan’ny zandary misahana ny raharaha ilay fikasan’ity orinasa mpanafatra vary avy any ivelany tantanana tera-tany Indiana hivarotra vary efa simba sy lo 2.776 lasaka, tratra tao Androranga; izay efa fomba fanaon’ity mpandraharaha Indiana ity, saingy izao vao tratra izy roa lahy ireto. Niitatra anefa ny raharaha izao, satria nisy polisy roa lahy miasa eo anivon’ny “section judiciaire” eto Toamasina niambina ilay magazay, mikasa ny hivarotra vary simba sy lo ireto tamin’ny fahatongavan’ny “task forces” misahana ny resa-bary eto Toamasina. Tsy vitan’ny efa mpiray tsikombakomba tamin’izao resaka vary simba sy lo izao ireto polisy roa lahy ireto, fa mbola nikasi-tanana mpanao gazety nanao ny asany tamin’ny alàlan’ny tehamaina in-droa, sy mbola nanivaiva ny prefen’i Toamasina Benandrasana Cyrille ihany koa. Raha miatrika ny fakana am-bavany azy eo anivon’ny zandary izany ireo mpiasa 44 mianadahy tratra nanivana ireto vary simba sy lo, sy ireo tera-tany Indiana roa lahy tompony, dia ny prefektiora kosa amin’ny maha-mpiasam-panjakana azy no nisahana ireto polisy roa lahy, ka nisy ny fampiantsoana nataon’ny prefe ny lehiben’ny polisy eto Toamasina sy ireto polisy roa lahy ireto, nifanazavana tamin’ny zava-nisy hahafahan’ity lehiben’ny asam-panjakana eto Toamasina ity mandray ny fepetra mifanaraka amin’ny heloka vitan’izy roa lahy ireto. Tratra am-bodiomby anefa izy roa lahy ireto ka tsy niaro azy ireo intsony ny talen’ny filaminana eto Toamasina, sy ireo lehiben’ny polisy, ary ireo polisy namany satria aretina sy tsy fahasalamana lalina ho an’ny vahoaka no haterak’izao firaisana tsikombakomba nataon’izy roa lahy ireo izao, noho ny resa-bola sy fanaovana kolikoly avo lenta.
Sol 14 mai 2018 at 19 h 24 min · Edit
Mbola haveriko eto indray ny hoe ROAHANA hiala eto Madagasikara ireo vahiny rehetra ireo dia ho hita eo izay vahiny mahazo alalana miasa eto @ fotoana voafetra. Havaozina ny fifanarahana raha ilaina izany avy eo.
DG Scar 14 mai 2018 at 11 h 50 min · Edit
Izay foana io ka, tsy ha,araraotra hampihinana poizina sy karazana maloto rehetra izao ny vahiny raha tsy ny Malagasy toy ny tena ihany no mandrisika sy miray tsikombakomba aminy. Io moa izao hita mibaribary sy tratra am-bodiomby mihitsy fa ny polisy izay nomena andraikitra hiaro sy hanakana no toa vao maika manao ny tsy fanao ka dia inona no azo antenaina amin’izany. Raha ny tokony ho izy dia esorina tanteraka ary tsy avela hanao asan’ny mpitandro filaminana intsony ny toa azy ireo, na ambony na ambany grady io satria tsy mendrika.